Translate woyikekayo from Xhosa to German - MyMemory
Results for woyikekayo translation from Xhosa to German
Unguwena wena woyikekayo; Ngubani na onokuma phambi kwakho, wakuba nomsindo?
UloThixo woyikekayo ezingcweleni zakho. UloThixo kaSirayeli, ubanikayo amandla nokomelela abantu. Makabongwe uThixo.
Ngubani na onjengawe phakathi koothixo, Yehova? Ngubani na onjengawe, wena uvethe ubungcwele, Woyikekayo ezindumisweni, wenzayo ngokubalulekileyo?
confluent (English>Greek)z pal (Spanish>English)gemeinschaftsrahmen (Latvian>German)bin (Malay>Korean)i wanna ganna (English>Italian)regarding offers (English>German)ältesten (English>Dutch)ripartirà (Italian>Turkish)come on video (English>Portuguese)na jaki adres mam je wysłać (Polish>English)caulinite (Portuguese>English)mera land dekhna hai (Hindi>English)ano ang kahulugan ng usalin (English>Tagalog)decimam (Latin>Spanish)pudendálními (Czech>French)enter (English>Hindi)impleverunt (Latin>Norwegian)isinilang] (Tagalog>English)postulantes (Latin>French)ngobuqaqawuli (Xhosa>Hebrew)mon papillon (French>English)nataka picha za x8 (Swahili>English)markkinatasapainoa (Finnish>Lithuanian)ang ganda mo bicol to tagalog (Tagalog>English)departamentele (Romanian>Latvian)